Iindaba - Zeziphi izibonelelo zeSendust yemagnethi yeringi kwisicelo sokungenisa?
Zeziphi izibonelelo zokuthumela isangqa semagneti kwisicelo sokunyanzeliswa?
Inxulumene nokuxinana kwamandla ombane we-magnetic, i-ferrosilicon iphezulu kune-sendust. Nangona kunjalo, i-sendust inezibonelelo ezigqwesileyo, ezibonakaliswa kukugcwala okungcono okungcono, ilahleko engabalulekanga, uzinzo lobushushu kunye nexabiso eliphantsi lokusetyenziswa. I-inductors esebenzisa i-sendust magnetic cores cores inokuphelisa izinto ezingathandekiyo ezibangelwa ngumsantsa womoya wendandatho yemagneti.
iinkcukacha ngolu hlobo lulandelayo:
1. Ubuninzi be-flux density B ye-ferrite ingaphantsi okanye ilingana no-0.5T, engaphantsi kwesiqingatha se-sendust. Oko kukuthi, phantsi komthamo ofanayo, ukugcinwa kwamandla kwe-ferrite kusezantsi kakhulu kunokuthumela.
2. Ukuxhathisa kobushushu be-ferrite kukungaphantsi kakhulu ekuthumeleni. Ukugcwala kwemagneti yokuqina kokuxinana kweferrite kuncitshiswe kakhulu phantsi kweemeko ezinobushushu obuphezulu, ngelixa ubungqingqwa bemagneti obushukumayo be-flux ye-sendust ayitshintshi ngokubonakalayo phantsi kweqondo lobushushu eliphezulu.
3. I-Ferrite ineempawu zokukhawuleza kunye nokuzala. Ukuba idlula ixabiso elikhuselekileyo langoku, inokubangela ukuba umsebenzi we-inductance uhle wonke, ngelixa i-Sendust ineempawu zokuthamba kunye nokuzala kwaye inokumelana namaxabiso aphezulu ngoku.
4. I-Sendust cores zikulungele kakhulu ukugcina amandla okucoca ulwelo ngaphakathi xa kucinywa umbane. Xa kuthelekiswa ne-air-gap ferrite okanye ii-cores ze-iron cores ezinobungakanani obufanayo kunye nokuvumeleka, i-sendust cores ene-flux saturation ephezulu inokubonelela ngamandla aphezulu okugcina.
5. Xa kunyanzelekile ukuba kudluliswe ivolthi yokunxibelelana enkulu ngaphandle kokuvelisa izixhobo zokuhluza ingxolo epheleleyo, ukusetyenziswa kwesiseko sokuthumela kunokunciphisa ubungakanani becebo lokucoca ulwelo kwi-intanethi. Ngenxa yokuba inani lokujika okufunekayo lingaphantsi kunaleyo ye-ferrite, i-sendust nayo ine-magnetostriction coefficient kufutshane ne-zero, oko kukuthi, ithule kakhulu ekusebenzeni kwengxolo okanye i-intanethi yangoku kuluhlu oluvakalayo lwamaxesha.
Ubuninzi be-flux magnetic flux kunye neempawu ezilahlekileyo eziphantsi zokwenza ii-sendust cores zifaneleke kakhulu kwimijikelezo yamandla okulinganisa kunye nokusetyenziswa kwe-unidirectional drive, ezinje ngeziguquli zeempukane kunye neziguquli zokubetha.